Sideen ugu rogaa astaanta Apple badhanka iPhone-ka ee dheeraadka ah? - SmartMe
Waxa daabacay	 Sebastian K.
Ma isweydiineysaa sida loogu rogo astaanta Apple badhan dheeri ah oo ku saabsan iPhone-kaaga? Waa wax aad u fudud! Haddii aad isticmaaleysid taleefannadan casriga ah oo aad ku rakibtay barnaamijka IOS, markaa waxaan kuu haynaa war wanaagsan. Waad ku beddeli kartaa astaanta Apple galka gadaashiisa ee guryaha badhan taariikhi ah bilaash.
Sideen ugu rogaa astaanta Apple badhanka cusub ee iPhone?
IOS 14, Apple waxay go'aansatay inay soo bandhigto hawl loo yaqaan 'Back Tap', taas oo nooca Polish-ka ah ee barnaamijku yahay "Back tap". Waxaa isticmaali kara milkiilayaasha iphone 8 iyo casriga cusub.
Iyada oo la adeegsanayo tuubbo laba jibbaar ah ama saddex-laab ah, waxaan ku socodsiin karnaa hawlo ay ka mid yihiin marin-u-helidda 'Shortcuts' si ay si dhakhso leh ugu helaan Siri, Magnifier, VoiceOver ama AssitiveTouch Shortcuts
Si aad u awood u yeelatid shaqada, kaliya tag Settings -> Helitaanka -> Taabasho, ka dibna dooro ikhtiyaarka Back tap, ka dibna dooro ikhtiyaarka tuubbada laba-laab ama saddex-laab ah oo xulo tallaabada aad rabto. Intaas ka dib, waxaad u baahan tahay oo dhan inaad sameyso waa inaad ku garaacdaa dhabarka taleefanka si aad u bilowdo howlaha horay loo dhigay. Waa wax fudud, ma aha?
Cusbooneysiinta firmware ee AirPods 2 iyo Pro ayaa soo muuqday
qeybaha hawada, duulimaadka 2, airpods pro, tufaaxa
Dhowr maalmood ka hor, nooc cusub oo ka mid ah qalabka loo yaqaan 'AirPods 2' iyo AirPods Pro ayaa soo baxay. Eeg sida loo hubiyo haddii dhagaha la cusbooneysiiyay iyo sida aad isugu dayi karto inaad dadajiso howlaha cusbooneysiinta. Sidee loo hubiyaa haddii aan heysano cusbooneysiin? Si aad u hubiso ...
Siri ma aqoonsan doonaa dhawaqda dhawaqiisa dhawaa?
tufaaxa, Patent, tufaax macaan, Suuriya
Sida lagu soo wariyay Patently Apple, Rafaa ka Cupertino wuxuu ka shaqeynayaa horumar aad u weyn oo ku saabsan kaaliyaha codkiisa. Siri ugu dhakhsaha badan ayaa laga yaabaa inay bartaan inay iska indhatiraan codka khiyaaneeye macquul ah. Kaaliyaha codka ee Siri ayaa durbaba garan kara codka isticmaalaha, mahadsanid ...
Amazon.pl wuxuu bilaabaa iibinta qalabka Apple
Ilaa dhowaan, si aan uga iibsanno qalabka Apple shirkadda Amazon, waxay ahayd inaan u guurno nooca Mareykanka ee bogga. Hadda, si kastaba ha noqotee, wax waliba waxay muujinayaan inaan ku heli doonno xulasho noocan oo kale ah Poland. Apple wuxuu bilaabay inuu ku iibiyo Amazon.pl, laga bilaabo ...